Wireless ကနေ LAN ကို ချိတ်မယ် ( Window XP) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော် ဝိုင်ယာလက်ကနေ လန်ချိပ်ဆက်ပုံကလေးကို ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်ခင်မျာ။သူက ဘယ်လိုလည်း ဆိုရင်တော့ Laptop ဒါမှမဟုတ် Wireless ပါတဲ့ WIFI-Motherboard ဒါမှမဟုတ် Wireless Adapter တပ်ဆင်ထားတဲ့ Motherboard တွေသုံးနိုင်ကြပါတယ်....Share ပေးတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး LAN အဆင်သင့်ရှိနေရပါမယ်.Share တော့ပေးချင်တယ် LAN မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အလွယ်တစ်ကူ LAN Card လို့ပြောနေတဲ့ Card တွေဝယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Share ပေးမည့်သူဘက်မှ LAN နဲ့ Wireless ကို ဖွင့်လိုက်ပါ...
Wireless Properties ကိုဝင်ပြီး ပုံပါအတိုင်း Click ပေးလိုက်ပါ.
OK ကို Click လိုက်ပါက အပေါ်မှပုံအတိုင်းပြောင်းလဲ သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အောက် အဆင့်ကို ဆက်သွားပါ မယ်။
LAN ရဲ့ Properties ကိုဝင်ပြီး မိမိအသုံးပြုနေသော LAN နံပါတ်...ဒါမှမဟုတ် မိမိ LAN Card ၀ယ်ယူထားပါက မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုက်ပါ....အပေါ်မှ ပုံကဲ့သို့.လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ခင်မျာ။ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Share ပေးမည့်သူ ဘက်မှအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ....
(မှတ်ချက်။ ။Firewall ကိုတော့ ပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်)
နောက်တစ်ဆင့်အသုံးပြုUser အနေနဲ့ကတော့ လွယ်ကူပါတယ် ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးလုပ်ဆောင်စရာမလိုပါဘူး ခင်မျာ။
အထက်ပါ ပုံလေးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းလေးဖြည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ ခင်မျာ။ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတို့ မှာ အင်တာနက် ကို ကြိုက်တဲ့နည်းများဖြင့် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီခင်မျာ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူတောသားလေး။..................
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဆန်းမောင်, ဇရက်, နိုင်လင်းစိုး, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသက်အောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, aungkohtat, aungzaw, azp09, babylay, carnationflower, Jaff Hardy, lwamnaymal, nyowin, yawnathan
ပြန်စာ - Wireless ကနေ LAN ကို ချိပ်မယ် ( Window XP)
မရှင်းလို့ မေးပါရစေ IP Address နဲ့ ICS on ပေးတာနဲ့ wireless LAN မဖြစ်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ computer နှစ်လုံးဟာ internet connection ကို share သုံးနိုင်ရုံပါ။ ဒါအပြင် computer နှစ်လုံး connection ရ မရ မသိရသေးပါဘူး၊ ping စမ်းရဦးမယ်။
ဒါနဲ့ preferred DNS server မှာ 192.168.44.1 ကို ဘာလို့ ထဲ့ ရတာ လဲ။ ရှင်းပြပေးပါဦး
ဇရက်, aungkohtat, paingsoeoo
ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ IP ဖွဲ့စည်းပုံဟာ IP တစ်ခုမှာ4Octet ရှိပါတယ် (ဥပမာ- 192.168.44.1) ရှိတယ် ဆိုပါစို့။
44 = Third Octet
1= Fourth Octet
အဲဒီလို Octet4ခုရှိတဲ့အထဲမှာ first Octet ကြိုကည်ြ့ခင်းဖြင့် Public IP လား /Private IP လားဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက IP မှာ Class3ခုရှိပါတယ်(A class /B class /C class)ဆိုပြီး သုံးခုရှိပါတယ်။
1 မှ 126 အထိက A class ပါ( First Octet ကိုပြောတာပါ)
128 မှ 191 အထိက B class ပါ ( First Octet ကိုပြောတာပါ)
192 မှ 233 အထိက C class ပါ ( First Octet ကိုပြောတာပါ)
အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာကလေးက private IP အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားတာဖြစ် ပါတယ်။Class C မှာ Private IP Address = 192.168.0.0 ကနေပြီးတော့ 192.168.255.255ထိဖြစ်ပါတယ်။
အခုအကို koarkarhtut မေးထားတဲ့ DNS server 192.168.44.1 ကလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ server ရဲ့ နံပါတ်ပါ။အခုလောက်ဆို အဆင်ပြေလောက်မယ် ထင်ပါတယ်ခင်မျာ။ မရှင်းသည့်အပိုင်း ကိုလည်း ထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ တေသားလေး......
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဇရက်, နိုင်လင်းစိုး, ဖယောင်း, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသက်အောင်, akm, aungkohtat, kyaylatt, paingsoeoo, phoelapyaee, yawnathan
ခင်ဗျား ဆိုလိုတာ 192.168.44.1 က server ရဲ့ DNS IP ဆိုတော့ 192.168.1.44.2 က server မှ connection ကို shared ယူ သုံးတာလား
server သုံးထားပြီဆို တော့ server မှာ DHCP က IP ချပေးပြီး 192.168.44.2 ကို client အဖြစ် ချိတ်ရင် ကော ?
ခင်ဗျာ ရှင်းထားတာက internet connection share လုပ်ဖို့ အတွက် DNS ရှိရမလိုဖြစ်နေတယ်။ နည်းနည်းစဉ်းစား ကြည့်ပါဦး
ကို koarkarhtut ရေ 192.168.44.2 က ပြန်ပြီးခွဲယူတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ နံပါတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ အဲဒီကောင်လေးကို ပုံသေတွက်ထားလို့ မရပါဘူး။ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preferred DNS server က 172.16.0.4 ဆိုပါစို့ ခွဲယူတဲ့ ကွန်ရဲ့ preferred DNS Server မှာလည်း 172.16.0.4 ထားပေးရပါမယ်။အခုအကို မေးတဲ့ preferred DNS server ကလေးနေရာမှာ အကို တို့ဆီမှာ သုံးနေတဲ့ preferred DNS Server နံပါတ်ကလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ ခင်မျာ။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ သောသားလေး....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဆိုလိုတာက မလိုအပ် ဘဲ DNS ကို preferred လုပ်ထားလို့ပါ။ DNS ကို Perfeered လုပ် တာက Domain နဲ့ချိတ်မှလိုအပ်တာပါ။
ပို့စ် 162 ခုအတွက် 774 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနော့်ရဲ့လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတာကတော့ preferred DNS Server နံပါတ်ထည့်ပေးမှရပါတယ်။
ဒီပုံကအခုလက်ရှိသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုကျနော်ပြန်ပြီးအင်တာနက် share ပေးထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် wireless lan တော့မဟုတ်ပါဘူး။
[SIZE="3"][SIZE="4"][SIZE="5"][FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]"အလိုအပ်ဆုံးက ဘ၀မှာအရိုးသားဆုံးနေဖို့"[/COLOR][/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဗေဒါလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇရက်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, aungkohtat
Find More Posts by ဗေဒါလေး
ICS ဆိုရင် DNS ကို preferred လုပ်ရပါတယ်။
Shared ပေမယ့် စက်မှာ start>>>> run>>>cmd>>ipconfig /all ရိုက်ပြီး DNS IP နဲ့ Gateway ကိုရှာပြီး
TCP/IP properties မှာ ထည့်ပေးရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ DNS မှ naming တွေက ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ DNS ရဲ့ အလုပ်က domain name နဲ့ IP ကိုဘာသာပြန်တဲ့အလုပ်ပါ။
စမ်းချင်ရင် start>>>run>>>> cmd>>>nslookup www.google.com လိုရိုက်ကြည့်ပါ ။
www.google.com ရဲ့ IP 216.239.61.104 ဆိုတာတွေရပါမယ် ။တခြား ဟာတွေလဲစမ်းကြည့်ပေါ့
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ koarkarhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇရက်, ညီနေမင်း, ဖယောင်း, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, ဗေဒါလေး, chit loon thu, phoelapyaee, yawnathan
Dlink နဲ့ ချိတ်ပုံချိတ်နည်းလေးလဲ ပြောပြပေးပါဦး ကျွန်တော့်ဆီမှာ wirless ကို Dlink နဲ့ချိတ်ထားပါတယ် .. ဒါပေမယ့် လိုင်းမတက်ဘူးဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် .. တစ်ချက်လောက် ကူညီပေးကြပါဦး .. Network နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာမှကို မသိလို့ပါ ..
မော်ကျိုးသိသလောက်ဝင်ပြောမယ်နော်. ကိုညီနေမင်းမေးတာကိုသိသလောက်ကလေးဖြေပေးမယ်နော်... D-links က switch တစ်မျိုးပါ. Mordem ကအထွက်ကို switch နဲ့ခံပြီးတော့ switch ကနေ Router ကို ချိတ်ပေးလိုက်ပါ.. ဒါပေမယ့် Routor မှာ IP တော့ ပေးရသေးတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်ဆီမှာဒီလိုဘဲသုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ...... အဆင်ပြေပါစေ.....
ပို့စ်4ခုအတွက် 15 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ရင် မထည့်ပဲနဲ့ ကွန်ပျူတာနှစ်လုံးကို ချိတ်ကြည့်လိုက်ပါ့လား။။။
အားလုံးက Pro တွေမဟုတ်ဘူးလေ...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ monelay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လူမုန်း, ကြွက်, aungkohtat
Find More Posts by monelay
ကျွန်တော်ကြည့်ရတာနက်ဝက်ပိုင်းမှာတော်တော်အားနည်းတယ်နဲ့ တူတယ် တခြား ကွန်ပျူတာဖိုရမ်မှာလေ့လာကြည့်ပါဦး
Find More Posts by hackbu
Originally Posted by hackbu
ကို hackbu အနေနဲ့ network ပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင် ၀င်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်........
အသင်းဝင်တွေနဲ့ဖိုရမ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ စကားမျိုးတော့ မပြောသင့်ပါဘူး........
အောက်ကလင့်မှာ ဖိုရမ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်လိုက်ပါဦး.....
Admin များအား အမှားပါခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်...........
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ akm အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လူမုန်း, bonge, roselele, yawnathan
ကွန်ပျူတာ ရယ် Lan ၇ယ်ရှိရင်wirless internet ချတ်လို့ရပြီလား။ ကြိုးတွေ ဖုန်းတွေမလိုဖူးလား။
Last edited by tu tu; 23-11-2009 at 10:45 AM.. Reason: edit quote
Jaff Hardy ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Jaff Hardy
ပြည့်ပြည့် စုံစုံလေး သိချင်တယ် ...စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Internet connection အကြောင်းလေးကို အောက်ကလင့်မှာသွားဖတ်လိုက်ပါ..သားလေး ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်....
ပြန်စာ - Wireless ကနေ LAN ကို ချိတ်မယ် ( Window XP)
၀ါ ယာလက် အ၇င် က ပေး တယ် နောက် ကိုင် ကျအထိုင် ကပိတ် ထား လို့
အထိုင် က ပိတ် ထားတာ ကို ကိုယ် စက် ဆီ ၀ါ ယာ လက် ၇အောင်ပြန် လုပ် လို့ ၇လား
သိ ၇င် ပြော ပြ ပါ့ လား အကို တို့ေ၇
Find More Posts by koaung528
30-06-2016, 03:59 AM
အပေါ်က D-Link နဲ့ချိတ်တာကိုပြောထားတာမရှင်းလို့..ကျွန်တော် လက်ရှိလုပ်ထားတဲ့ပုံက Modern ကနေ Router ကို LAN တိုက်ရိုက်ချိတ်ပြီး Router ကနေမှ ကွန်ပြူတာတွေကို LAN ပြန်ချိတ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ မှားများနေလားခင်ဗျာ..ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်..ကျွန်တော့ စိတ်ကူးနဲ့ချိတ်ထားတာမို့လို့ပါ...
networking guide, networking howto, networking knowledge, windows howto, windows knowledge
Solid-state drives ( SSDs ) and hard disk drives ( HDDs ) KznT Hardware များဆိုင်ရာ024-07-2010 10:58 PM